I-Mandarin | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Izinhlamvu ze-apula ezinhlobonhlobo ze-candy nokutshalwa kwe-agrotechnology
Ngokuvamile abalimi balima izinhlobo eziningana zezihlahla ze-apula ezweni labo. Futhi ngokuvamile ukukhetha kuwela ezinhlobonhlobo ze-Candy, ezinika izithelo ezinomsoco futhi ezinomsoco kakhulu. Izithelo zokuqala zivela esihlahleni se-apula ngasekupheleni kukaJulayi, uma, ngempela, isihlahla sinakekelwa kahle. Indlela yokwenza ngayo futhi yiziphi izici ezihlukahlukene, sizobe sitshele kule ndaba.
Indlela yokukhulisa i-tangerine ekhaya
I-Mandarin yafika eYurophu eminyakeni engu-170 nje edlule ngenxa yeMichelin Michel Tecor. Isithelo sidinga igama lesiShayina. Bangadla kuphela izikhulu ezicebile zaseChina - ama-tangerines. Izinhlobo zama-mandarins nezinhlobo ezincane ezikhulayo zifanele izitshalo zasendlini. Cabanga ngezinhlobo, izinhlobo ze-mandarins, izinhlobo zazo bese unquma izici eziyinhloko nezici.
Yimaphi ama-tangerines angatshalwa emhlabathini ovulekile
I-tangerines yokuvuleka yizithelo ze-citrus, efana, uma kuqhathaniswa nama-oranges, kunezici eziningi ezifana nobukhulu nombala wezithelo, ubunzima bokuhlukanisa ikhasi, ukunambitheka nephunga, inkathi yokuvuthwa. Ababelethi kufanele bafeze noma yiziphi izidingo zabathengi abakhethiweyo balesi sithelo.
Iminduze yamanzi nezinye izinhlobo: i-Asiatic, Tiger, Marchagon
I-Meadow foxtail: ukutshala nokunakekela isiko
I-Phlox awl: ukutshala nokunakekela emhlabathini ovulekile
Imbali ye-Adenium evela embewini ekhaya
Uyazi ukuthi ungakhula kanjani i-Venus flytrap kusuka enzalweni?
Sitshala imbewu yase-Chinese lemongrass nangezinye izindlela
Indlela yokubhekana ne-weevil yenqolobane
Utamatisi we Cherry: kanjani ukutshala izinhlobo ezinhle kakhulu ezitsheni zokushisa?